Huawei FreeBuds 3, anyị nyochaa mbipụta ọhụrụ na uhie | Akụkọ akụrụngwa
Firmlọ ọrụ Asia bidoro oge ole na ole nke ekweisi ekweisi ezi okwu nke nwere ezi atụmatụ. Oge a ka anyị ga-enyocha mbipụta ya pụrụ iche na uhie. Anyị nwere Huawei FreeBuds 3 na-acha uhie uhie, nọrọ iji hụ nyocha anyị na atụmatụ ya niile na nyocha a zuru ezu. Anyị ji n'aka na ị chọghị ịhapụ ya, yana dịka anyị na-emekarị, anyị esonyela nyocha a na vidiyo ebe ị ga-ahụ ahụmịhe anyị, unboxing na otu ha si arụ ọrụ kwa ụbọchị. Anyị na-aga ebe ahụ nyocha zuru oke nke Huawei FreeBuds 3 na-acha uhie uhie.
1 Design na ihe: Habitual na irè
2 Autonomy: Ezigbo nnwere onwe
4 Qualityda àgwà na mkpọtụ kagbuo
Design na ihe: Habitual na irè
Ihe mbụ ị chere mgbe ị hụrụ igbe FreeBuds 3 bụ na ha na-echetara gị igbe nke ụfọdụ chiiz waxy nke soro anyị n'oge anyị bụ nwata, ọkachasị ugbu a na mbipụta uhie ọhụrụ a nke emegoro na coincbọchị Valentine. Otú ọ dị na n'agbanyeghị ọchịchọ ịmata ịbụ kpamkpam gburugburu, Nchaji ikpe bụ kọmpat, dịtụ gịrịgịrị karịa Apple AirPods ma nwee ntakịrị sara mbara karịa nyere gburugburu ya, mana n'agbanyeghị nke ahụ, anyị na-eche otu n'ime okwu ikpe kachasị mfe iji buga ndị a nwalere ruo taa.
Nha nke ikpe: X x 4,15 2,04 1,78 mm
Nha nke handset: 6,09 x 2,18
Ibu ibu ikpe: 48 grams
Ibu ibu handset: 4,5 grams
Eziokwu bụ na anyị nwere ụkpụrụ tozuru etozu n'ahịa, ọ dị ezigbo mma ma na m nwere ekele maka ya. Ọ na-adịkarị mfe ikwu na oyiyi Apple AirPods yiri ka ị na-ezo aka na enweghị uche, mana Eziokwu bụ na ọ bụ ọrụ na naanị ergonomic imewe, Tupu nke a ga-arụ ụka obere, na-eme ihe n'eziokwu. Ewuru ha na plastik "jet" na-egbuke egbuke, anyi nwere ikanam akara na-esote n'ọdụ ụgbọ mmiri USB-C na ọnọdụ LED dị n'ime, n'etiti ekweisi abụọ.
Autonomy: Ezigbo nnwere onwe
Anyị na-amalite site na teknụzụ nkọwa. Anyị nwere batrị n'ọnụ na-ekwe nkwa awa anọ nke nnwere onwe maka ekweisi ọ bụla, awa iri abụọ na mkpokọta ma ọ bụrụ na anyị gụnyere ikpe na-enye ebubo anọ ọzọ. Ibu ha, anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB-C ruo 6W na n'ezie wireless Nchaji na Qi ọkọlọtọ oge nke 2W. Anyị ekwenyela na a zutere akụkụ ahụ ma anyị nwere ihe dị ka elekere elekere iji kwụọ ụgwọ igbe ahụ na oge elekere iji kwado ekweisi, nke ga-adị obere karịa ebe ọ bụ na anyị ekwesịghị ịhapụ batrị ahụ.
Batrị igbe: 410 mAh
Batrị ekweisi: 30 mAh
Na omume, a na-emezu nkwa nkwa ahụ. N'okwu m, achọtala m ihe dị ka awa 3 nke nnwere onwe na olu nke 70% mgbe niile ma na-akagbu mkpọtụ mkpọtụ n'ihi na mbuaha ojiji nke oku na music site Spotify. Nchaji ewewo obere oge karịa oge ruru n'ihi na n'ọnọdụ m ejirila m chaja wireless Qi na-eme ka ọ dị mma. Ha na-enye ezigbo ahụmịhe na nke a.
Site na ngwaọrụ Huawei ihe niile dị mfe. Nanị imeghe igbe dị nso na Huawei P30 Pro na ịpị bọtịnụ n'akụkụ anyị na-amalite usoro nhazi ngwa ngwa ma dị mfe na-eduzi site na ụdị animations. Iji mee ka nke a dị mfe ha na-erite uru nke Kirin A1, Bluetooth 5.1 SoC Uzo abuo (nke mbu), ya na onye nhazi ihe di n'ime 356 MHz na na o nyebeghị ụdị nnyonye anya ọ bụla, belata ma ọ bụ igbu oge n'ule anyị. Huawei kwere nkwa na ọ ga-egbu oge n'okpuru 190ms na njikọ na ngwaọrụ maka ihe na-erughị 3 sekọnd agbasoro.
Ekele maka nhazi a, nke dị ugbu a na ngwaọrụ ndị ọzọ weara nke ụlọ ọrụ, yana njikọta na EMUI 10 anyị ga-enwe ike ị nweta ihe ọ juiceụ juiceụ niile na ekweisi, Agbanyeghị, anyị nwere ngwa dị na Applọ Ahịa Ngwa na, n'ihe banyere ngwaọrụ gam akporo, ga-enye anyị ohere ịmezigharị omume mgbapụ abụọ (adịghị mkpa ma ọ bụrụ na anyị jiri EMUI 10). Anyị ga-ahọrọ ma anyị ga-akwụsịtụ egwu ahụ, gaa egwu na-esote, kpọọ onye inyeaka ma ọ bụ megharịa mkpọtụ mkpọtụ, anyị nwekwara ike hazie ya n'adabereghị maka ekwentị ntị ọ bụla.
Ihe a Ai Life ngwa (naanị dị na gam akporo) ga-enye anyị ohere ịmara nke ọma ozi niile na ọbụlagodi nyocha maka mmelite ngwa ngwa maka ekweisi, agbanyeghị, dịka anyị kwurula na mbụ, ọ bụrụ na anyị jiri EMUI 10 ọ dịghị mkpa, ebe ọ bụ na ntọala nke Bluetooth na ọbụna na-akpaghị aka ga-arụ ọrụ ndị a. Na ahụmịhe anyị àgwà igwe okwu maka ịkpọ oku nwere oke mma, ọ na-ekewapụ anyị nke ọma site na mkpọtụ ma na-enye anyị ohere ịnụ nke ọma (ma gee anyị ntị), otu n'ime ahịa kachasị mma na nke ahụ. O nwere igwe okwu nwere nchebe na okpuru ya, yana ihe mmetụta ọkpụkpụ iji belata mkpọtụ mgbe ị na-ejide ụda gị site na ịma jijiji.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ igwu egwuregwu, ịkwesighi ichegbu onwe gị n'akụkụ ụfọdụ, n'agbanyeghị na ị naghị enye mmetụta nke ndozi dị oke, ha anaghị ada ngwa ngwa, na asambodo ha ajirija na ikwommiri eguzogide IPX4 ọ ga-enye anyị ohere iji ha nwayọ.
Qualityda àgwà na mkpọtụ kagbuo
Anyị na-amalite na ọdịyo dị mma, anyị na-eche ihu ekweisi nke dị ihe dị ka € 200 na ọ bụghị naanị na a ga-ahụ ya na nhazi ya. Anyị enweghị bass accentuated, mana nke ahụ na-egosipụtakarị ezigbo mgbasa ozi, yabụ anyị nwere usoro mgbasa ozi dị mma na-eburu n'uche ụdị ekweisi. Oke kachasị dị oke mma ma na ogo nke ọ dị n'elu ịnyịnya na asọmpi kachasị yana yana ngwaahịa nke otu ọnụahịa ahụ. N’ụzọ doro anya, dịka ọ na - eme n’ụdị ekweisi a oge niile, emebeghi ha maka ụda olu kacha mma.
Banyere nkagbu mkpọtụ, nke ọma ... Anyị na-echebara atụmatụ ya na-emeghe na nhọrọ ya na-atụ ụjọ iji teknụzụ a. Enweghi ikewapụ nkewa (ha anaghị ege ntị) ha enweghị nhọrọ ọ bụla mana ha ga-arụsi ọrụ ike na ya. Dị ka ndị dị otú a, nkagbu mkpọtụ ya abụghị ọrụ ebube, ọ na-elekwasị anya na iwepu mkpọtụ mpụga na ugboro ugboro, mana chefuo iche naanị na njem ọha na eze ma ọ bụ ihe ndị yiri ya.
Nwere ike ịzụta ihe ndị a Huawei FreeBuds 3 na-acha uhie uhie maka euro 179 ma na Amazon ma na ukara website nke Huawei, Huawei Space na Madrid na isi ihe ire ere.
Àgwà nke ihe ndị ahụ na-ewu ha
Nwere onwe na ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ
Ezigbo mwekota na ngwaọrụ Huawei
Ike iji hazie ntọala na nkagbu mkpọtụ
Enwere ike ịkọ ha ọnụ karịa
Ọ dịkarịrị mfe iji ma ọ bụrụ na ịnwe ngwaọrụ nwere EMUI 10
Ha anaghị ekwe ka ị gbanwee olu dị na ọnọdụ emetụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Huawei FreeBuds 3, anyị nyochaa mbipụta ọhụrụ na uhie